Forum serasera malagasy Ny fahavoazan'ny fidatiana radioactive - Dinika forum.serasera.org
Ny fahavoazan'ny fidatiana radioactive
Fitohizan'ny hafatra : Ny fahavoazan'ny fidatiana radioactive
Nehemiah - 18/05/2013 15:24
Be ny olona mieritreritra fa ny daty aman-tapitrisa taona omen'ny manam-pahaizana dia azontsika atokisana tahaky ny fahafantarantsika ny firafitry ny atôma sy ny angovo nokleary. Ary satria mirakotra mistery be mihitsy ny fidatiana radioactive dia maro ny tsy mahazo an-tsaina akory ny fomba fandehany, fa dia mino azy ho marim-pototra fotsiny.
Kanefa tsy saro-pantarina ny hevitra ifoton'ny fidatiana radioactive (na fidatiana radiométrique), indrindrindrindra satria mikajy ny fotoana efa lany matetika ny ankamaroantsika, oh. hatr@ nahaterahantsika na hatr@ nanombohantsika nandeha tongotra. Ny hazakazaka am-pilomanosana izao no toe-javatra mahazatra antsika ka ahafahantsika mahazo an-tsaina ny tetika ampiasaina rehefa mandrefy ny fotoana. Rehefa azontsika @'izay ny ilaintsika atao dia azo ampiharina @ fidatiana radioactive ny hevitra ka mandinika raha mahavita ny zavatra andrasana @ ilay tetika.
Alao sary an-tsaina ny mpilomano manao hazakazaka 1 500 m ary mpijery manana famantaranandro tsara kalitao. Manamarika ny mpijery fa rehefa tody @ faran'ny dobo filomanosana ilay mpilomano dia manondro 7 ora 41 mn 53 s ny famantaranandro. Naharitra firy minitra ny hazakazak'ilay mpilomano ?
Fantatro ny eritreritrareo : t@ firy kay izy no niainga ? Eo indrindra isika : tsy hay fantarina ny fotoana nihazakazahan'ilay mpilomano raha tsy fantatra ny fotoana nisoratra t@ famantaranandro rehefa niainga izy. Tsarovy izay rehefa mikajy ny taonan'ny zavatra 1 ianao. Raha tsy mahafantatra ny fotoana fiaingàna ianao dia tsy hay fantarina ny fotoan'ny hazakazaka. Averiko indray mandeha, tsy hay fantarina.
Raha ny tena marina, tsy ampy akory ny mahafantatra ny fotoana niaingàna. Tsy maintsy arahina maso ny mpilomano mandritry ny hazakazaka ka isaina ny longueurs vitany mba ho azo antoka fa nahavita 1 500 m tokoa izy. Ary tsy maintsy jerena tsara raha todiny tokoa ny faran'ny dobo isaky ny longueur. Raha tsy maka toky an'izay ianao dia tsy afaka mahafantatra raha mitombina tokoa ny fotoana refesinao. Izany no ilàna mpiandraikitra fotoana 3 samy mandrefy ny fotoana vitan'ilay mpilomano mba ho afaka ampidirina @ bokin'ny records ny fotoana vitany.
Manova zavatra ve ny mampiasa famantaranandro précise kokoa ? Tsia dia tsia ! Azonao atao ny miresaka momba an'ilay cristal de quartz kely sy ny piézoélecticité ampiasaina mba ahafahana manana fototra tsy miovaova ho an'ny fivezivezen'ny voanaratra. Azonao atao ny misoritra ny fizotra atômika ao anatin'ny mpihilangilana mandeha quartz sy ny résonance-ny rehefa mahatody hatetika ambony sy tsy miovaova ilay izy, ary ny fomba ampiasàna azy mba hahazoana rythme précis mba ho voarefy @ fomba mitombina ny fotoana.
Fa tsy ho azonao atao mihitsy kosa ny mandrefy ny fotoana nihazakazahan'ny mpilomano raha tsy manara-maso ny fanombohana sy ny fizotra ary ny fiafaran'ny hazakazany ny vavolombelona 2 farafahakeliny.
Ka izay mihitsy ny olana rehefa anaovana fidatiana radioactive ny tranga géologiques. Mandany fotoana ela be mantsy ny mpanohana ny fahatokisan'ilay tetika mba hahakirana anao @ alalan'ny fanazavàna ny antsipiriany teknikan'ny fahalovana radioactive e, ny antsasa-piainana e, ny spectroscopes de masse e, sns kanefa tsy miresaka momba ny fahavoazana lehiben'ilay tetika mihitsy izy ireo : tsy azo atao ny mamantatra ny taonan'ny vato @ alalan'ny fidatiana radioactive satria tsy nisy olona nandrefy ny habetsaky ny élément-père efa teo rehefa niforona ilay vato ary tsy nisy olona nanara-maso ny fiovaovan'ireo élément ireo tao anatin'ny tantaran'ny géologie 1 manontolo.
Ka izay izany no fara-vono ho an'ny daty rehetra azo t@ alalan'ity tetika ity. Afaka mamoaka ny daty rehetra tianao arakaraky ny petra-kevitra iainganao. Ary izay mihitsy no ataon'ny mpahaibolantany : manamboavoatra tantara ara-bolantany ho an'ny vato aorian'ny tranga, arakaraky ny tarehimarika avoakan'ny laboratoire de géochronologie mandrefy ny isotopes ao anatin'ilay vato ankehitriny.
@ manaraka, raha mahita daty aman-tapitrisa taona, tsarovy fa tsy fandrefesana ara-tsiansan'ny fotoana nandalo ireny. Vokatry ny petra-kevitra filôzôfika goavana ireny.
Nehemiah - 18/05/2013 15:25
Ny fomba fikajiana daty @ alalan'ny karbôna 14 dia @ alalan'ny fandrefesan'ny tahan'ny C14 (izay radioactif ka manana antsasa-piainana 5 700 taona monja) @ C12 mahazatra antsika. Rehefa tratran'ny rayons ambony fitetika be avy @ masoandro ny CO2 any @ soson-drivotra any ambony any dia manjary C14 ny atôma karbôna ao anatin'ny molekiola, ka manjary misy "C14O2" kely dia kely ny CO2 @ soson-drivotra. Avy eo, trohan'ny zavamaniry, izay fototry ny chaîne alimentaire 1 manontolo, ho ampiasaina @ photosynthèse-ny ilay izy, ka misy C14 ny zavamananaina rehetra. Ka ampiasaina @ zavatra izay nivelona t@ lasa, tahaky ny taolana na ny hazo, izay tetika izay : refesina ny tahan'ny C14/C12 ao anatin'ilay zavatra ary ampitahaina @ tahan'ny C14/C12 @ zavamananaina ankehitriny ilay izy, ary anatsoahana daty @ alalan'ny fikajiana mampiditra ny antsasa-piainan'ny C14.
_ Heverina fa ny fahalovana radioactive ihany no hany nahatonga ny fiovan'ny habetsaky ny C14 ao anatin'ilay zavatra.
_ Heverina ho tsy niova mihitsy ny tahan'ny C14/C12 mandritry ny taona an'aliny ety ambony Tany.
Kanefa raha niova izay taha izay, na nisy C14 niditra na nivoaka avy @'ilay zavatra, diso tanteraka ny kajy. Raha nisy tokoa izao ny Safo-drano maneran-tany t@ andron'i Noah, nisy zavamananaina be C12 betsaka be tototra t@'izany ka nanjary niakatra be ny tahan'ny C14/C12 t@'izany. Ka manjary mihoatra taona an-ketsiny ny daty tsoahina avy @ sisan-javamananaina izay nivelona talohan'ny Safo-drano na taoriana kelin'ny Safo-drano.
N.B. : Satria 5 700 taona fotsiny ny antsasa-piainan'ny C14 (izany hoe ny fotoana mampanjavina ny antsasaky ny C14 ao @ vongana C14 iray nohon'ny radioactivité), dia tsy possible ny hisian'ny C14 ao anatina zavatra izay mihoatra ny 1 000 000 taona ny taonany. Kanefa misy C14 @ habetsaka tsy négligeable ny diamondra ! Kanefa akora mafy indrindra @'izao tontolo izao ilay izy ka tsy azo heverina ho avy any ivelany ity C14 ity. Ny dikan'izay dia tsy mba aman-tapitrisa taona tsy tambo isaina araky ny filazan'ny mpandala evôlisiona io diamondra io.
Ny fidatiana @ alalan'ny thermoluminescence dia azo avy @ sombin'akora fahita matetika tahaky ny quartz. Rehefa hafanaina ireo sombiny ireo dia miteraka hazavàna, ary heverina ho mifandray @ "radiation" ao anatin'ny firafitry ny cristal ilay izy. Heverina fa nitroka radiations avy @ environnement tsikelikely ilay izy, avy @ 0 t@ fotoana manokana t@ lasa (angamba t@'ilay izy tratran'ny hazavan'ny masoandro farany) ilay izy. Kajiana ny daty @ alalan'ny fampitahàna ny hazavàna izay avoakan'ny sombiny sy ny radiation ao anatin'ny tontolo nahitàna azy.
Indrisy fa be ny zavatra tsy fantatra raha hampihatra an'ity tetika ity ary betsaka koa ny petra-kevitra tsy maintsy foronina :
_ ny habetsaky ny "radiation" voangona ao anatin'ilay akora t@ fotoana manokana t@ lasa,
_ tsy niova mihitsy ny radiation t@'iny tontolo iny,
_ tsy niova ny tahan'ny fitrohan'ilay akora ny radiation.
Afaka manova an'ireny ny rano, ny hafanàna, ny hazavan'ny masoandro, ny fitangoronana na ny fihakelezan'ilay akora ao anatin'ilay tontolo, ary antony maro hafa koa.
Mitovy @ fidatiana @ alalan'ny thermoluminescence ny fidatiana @ alalan'ny luminescence stimulée optiquement, fa saingy tsy hafanaina ilay sombiny fa hazavaina mba hamoahany ny "radiation" nangoniny. Mitovy koa ny petra-kevitra ifotorany sy ny fahavoazany.
Ny ESR (electron-spin resonance) dia mitovy @ fidatiana @ alalan'ny thermoluminescence sy ny fidatiana @ alalan'ny luminescence stimulée optiquement, fa saingy ny rayons gamma indray no tifirina @ sombiny. Tsy manimba azy tahaky ny fidatiana 2 hafa ilay izy, ka azo averina ny fandrefesana. Mitovy indray koa ny petra-kevitra ifotorany sy ny fahavoazany.
Nehemiah - 18/05/2013 15:26
Ny tetika thorium-uranium (Th-U) dia fandrefesana ny habetsaky ny isotopes-na thorium sy uranium anaty santionany 1. Fantatra fa mihalo @ alalan'ny radioactivite ny uranium 238 ka manome thorium 230 (mandalo dingana maromaro, anisany ny fiforonan'ny uranium 234). Heverina fa ny fahalovana radioactive no mampifandray ny habetsaky ny uranium sy ny thorium mba hanaovana ny kajy. Torak'izay koa, alohan'ny ahafahana mikajy daty, tsy maintsy didiana tsy manapaka ny tahan'ny 230Th/238U sy 234U/238U, ary tsy maintsy asiana petra-kevitra koa hoe tsy nisy uranium na thorium niditra na nivoaka any ivelany, izany hoe mihidy ny sistema. Kanefa mazava ho azy fa tsy maintsy "nisokatra" ny taolana sy ny tany mba ahafahan'ireny akora ireny hiditra.
Mitovy @ tetika thorium-uranium ny tetika protactinium-uranium (Pa/U), fa saingy mampiasa ny isotopes uranium 235 sy protactinium 231, araky ny hitantsika @ anarany. Mihalo @ alalan'ny radioactivite ny 235U ka manome 231Pa. @'iny koa dia heverina fa ny fahalovana radioactive no hany mampifandray ny habetsaky ny isotopes 2. Torak'izay indray koa, alohan'ny ahafahana mikajy daty, tsy maintsy didiana tsy manapaka ny tahan'ny 230Th/238U sy 234U/238U, ary tsy maintsy asiana petra-kevitra indray koa hoe tsy nisy uranium na protactinium niditra na nivoaka any ivelany, izany hoe mihidy ny sistema. Eto indray koa, mazava loatra fa ny sombin-taolana rehetra anaovana fidatiana dia tsy maintsy "nisokatra" mba ahafahan'ireny akora ireny hiangona ao anatiny.
5laody - 21/05/2013 16:14
Mety tsara izy tapahinao par paragraphe ohatr'izao, misy hakan'ny maso sy ny saina aina tsara eny anelanelany.
Ny tsetsatsetsa tsy aritro kely dia ity: Rehefa manao fanadatiana amin'ny fotoana lava dia ohatran'ny malalaka be ny hadisoana azo ekena (tolerances), ka tsotsorina ny mampifanandrify tranga nisy tamin'ny tantara sy ny zavatra na sisan-taolana hitany ary lasa voasokajy hoe azo ekena avy hatrany ary dia ekena tokoa satria vitsy ny milaza hoe izaho tsy afa-po amin'io lazainao io.
Ity indray zavatra hafa: Nisy nanadaty mbola akaikikaiky ny grand pyramide d'Egypte. Mbola mitohy miady foana nefa ny hevitra hatramin'izao hoe ahoana ny fomba nibatan-dry zalahy an'ireo vatobe ireo (mety misy fika tsy araky ny lojika sy teknika amin'izao fotoana), ahoana ny eritreritrao momba ireo vongambato be tafakatra eny ambony be eny ireo?
Nehemiah - 22/05/2013 10:23
5laody Ny tsetsatsetsa tsy aritro kely dia ity: Rehefa manao fanadatiana amin'ny fotoana lava dia ohatran'ny malalaka be ny hadisoana azo ekena (tolerances), ka tsotsorina ny mampifanandrify tranga nisy tamin'ny tantara sy ny zavatra na sisan-taolana hitany ary lasa voasokajy hoe azo ekena avy hatrany ary dia ekena tokoa satria vitsy ny milaza hoe izaho tsy afa-po amin'io lazainao io.
Marina izany, fa izany hoe efa mihakely ny "hadisoana" arakaraky ny tetika fidatiana.
Ilay izy koa dia misy idiran'ny hevitra raiki-tapisaky ny ts11. Ohatra, raha hita t@ soson-dilatry ny Crétacé ambony ilay izy dia atao izay ifanandrifian'ny daty azo t@ fidatiana @ faramparan'ny Crétacé (70-65 tapitrisa taona lasa). Nefa tadidio fa fitompoana teny fantatra ny hoe 65 000 000 taona ny Crétacé ambony. Raha ny tenin'Andriamanitra no arahina, mifandraika @ faramparan'ny 40 andron'ny Safo-drano ilay izy.
5laody Ity indray zavatra hafa: Nisy nanadaty mbola akaikikaiky ny grand pyramide d'Egypte. Mbola mitohy miady foana nefa ny hevitra hatramin'izao hoe ahoana ny fomba nibatan-dry zalahy an'ireo vatobe ireo (mety misy fika tsy araky ny lojika sy teknika amin'izao fotoana), ahoana ny eritreritrao momba ireo vongambato be tafakatra eny ambony be eny ireo?
Voalohany, @ resaka fidatiana, tsarovy fa ny krônôlôjia ejipsiana ampiasain'olona dia mihitatra be (tahaky ny krônôlôjia asyriana koa), satria nanana fironana hi-gonfler ny androm-piainan'ny mpanjaka taloha ny mpanao tetiarana. Tsy zava-baovao ny révisionnisme ara-tantara .
Manaraka, efa fantatrao angamba fa lalin-tsaina hatr@ voalohany ny olombelona. Nahavita nanome anarana ny biby rehetra tao anatin'ny 1 andro i Adama. Nahavita namorona tanana kely i Kaina. Efa nahay nanefy vy i Tobala-Kaina. Nahavita nanamboatra Sambofiara mitovy habe @ Titanic i Noah mianakavy. Ka azo heverina fa nahay toy izay koa ny vahoaka izay niparitaka avy t@ Babela, tao anatin'izay koa ny fokon'i Mizraima izay niavian'ny Ejipsiana.
Ka nohon'izay, esory avy ao an-tsainao ireny andevo miasa mafy manosika vato ngeza be fahita @ Asterix & Obelix, satria biby fiompy (omby) no nanao ny ankabeazan'ny asa .
Maro ny hevitra naroso. Ny sasany dia nanao hoe nasiana rampe goavana be nahatody ny tampon'ny piramida izay 138 m ambonin'ny tany, fa tsy ho sarotra sy mandany akora fanamboarana nohon'ilay piramida ve ny manamboatra an'izay ?
Ny an'ny sasany indray dia tunnel en spirale ao anatiny no hevitra arosony, fa sady mamparefo ny firafitry ny piramida nohon'ny havesany izany no mananosarotra rehefa ampandalovina ao anatin'izay tunnel izay ny vato gilady be.
Nandinika an'izay ilay arsitekta Trevor Harris, ary nanolotra hevitra 1 mahafeno ny fepetra arsitektoraly takiana ho an'ny fanamboaran'ilay Piramida Lehibe, izay mizara dingana 2 :
- fampiasàna rampe fanamboarana any atsimo izay mahatody haavo critique fa tsy mahatody ny tampon'ny piramida :
64 m ny haavon'ilay rampe ary 512 m ny halavany, @'izay 1/8 fotsiny ny gradient, mora iakaran'ny olona sy ny biby miaraka @ vato.
Namboarina tsikelikely ilay rampe double, izany hoe nalefa avy @ ampahany 1 ny vato fanamboarana sady nasandratra ny ampahany 1, dia vice-versa.
- Rehefa tody ny 64 m dia 20%-n'ny piramida sisa no tokony amboarina, ary lasa kelikely sy maivamaivana kokoa ny vato. Namboarina "par niveaux" ilay piramida :
Nasiana karazana milina fanainga mba ingaina avy @ rampe ka hatr@ niveaux ny vato :
Avy eo nofenoina ny niveaux mba ho fisaka ny velarany :
T@ farany voa nasiana pyramidion. Toy izao izany ilay izy raha fintinina :
Tsy vokatry ny imagination-ny fotsiny aloha ilay izy satria nitantara momba ny rampe fanamboarana sy milina fanainga ilay mpahay tantara Grika Hérodote rehefa nitantara ny momba ny fanamboarana ilay Piramida Lehibe.
5laody - 23/05/2013 16:56
Misaotra anao nikaroka sy namaly,
ity koa misy lalana iray fibatana vato mety ho nampiasaina tamin'izany, mety ho fanampiny, mety ho hafa mihitsy.
Nehemiah - 23/05/2013 17:06
Misaotra ho an'ny vidéo fa mahaliana. Angamba ho vonoin'ny mpandraharaha @ fanamboarana trano ilay rangahy .
Azo heverina tokoa fa mety nampiasa tetika mitovitovy @'izay ny mpanorina an'ireny Piramida sy Stonehenge ireny. Vinavina fotsiny ny antsika fa ny zava-dehibe dia izao : nahay hatr@ voalohany ny olombelona ^_^.
sitlo - 24/05/2013 02:41
Tany amerika atsimo sy afovoany koa mba nisy namboatra piramida goavam-be. Sady nosoratany tamin'ny boky mihitsy.
Fa saingy tonga ny kristianina dia nandringana azy ireo. Ary ireo boky rehetra dia nodorana avokoa.
Ary ankehitriny dia ny tantara avy amin'ireo kristianina ireo sisa no ankalazaina.
endriny - 24/05/2013 06:28
Eto Madagasikara ihany koa misy pyramide 3, ilay atao hoe Ampasanavo, any amin'ny faritra Ankadiefajoro-Masoandro, izay manana ahavo 20 mahery avy.
Nehemiah - 24/05/2013 08:00
Inona kay no tianao iaviana, raha tsy mandiso aho ?
Nehemiah - 24/05/2013 08:02
Sao dia manana sary na rohy ianao, mahaliana izany nefa tsy mety hitako @ Net ilay izy.
endriny - 28/05/2013 20:05
Ilay sary tsy haiko ny mampiditra azy eto, saingy eo Anelanelan'Ambohitrabiby sy Fiaferana no misy io toerana io raha hitady ianao
endriny - 28/05/2013 20:08
Hay misy iray ihany koa eo Anjiron'i Pelaka amin'ilay vohitra malaza misy voalavo ohatry ny saka izay efa nanaovan'i Tlahy Latimera tatitra tamin'ny radio fahiny.